20 amaphutha ukwakheka ukuthi kufanele ayeke ukwenza njengamanje
Ngisho uma unentshisekelo kakhulu ubuhle futhi njalo ukulalela iseluleko, inani Imininingwane lingaba likhulu kakhulu, futhi ungavele ulahleke. izincomo ezibalulekile ayisheshi ukulibaleka. Ngakho Kulula ukwenza amaphutha - awukwazi ngisho ukuqagela ngabo! Sekuyisikhathi ukwenza umehluko! Manje uyazi ukuthi ukulungisa amaphutha abo, futhi ufunde amacebo ambalwa.
Wenza emabhulashini ongahlambulukanga ngenxa ukwakheka
ngezikhathi ezithile Lokhu kwenzeka kuwo wonke umuntu. Iningi ukwakheka abaculi waqaphela ukuthi inqubo okudla isikhathi yokuhlanza emabhulashini kuyingxenye yabo okungenani Intandokazi umsebenzi. Ngisho noma asesabi ukuthi ibhulashi ezingcolile uyoveza ukuqubuka, kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi zithinta ikhwalithi izimonyo. Imibala axutshwa futhi umugqa olunembile nje akusho vela - bristles ogcwele kakhulu zombala akayitholi elamukelekile.
Wena ukusebenzisa bronzer wonke ubuso bakho
Uma ufuna ukunikeza kukhanya ubuso bakho, sebenzisa Sun kunokuba bronzer - strip okhanyayo zesikhumba ngesikhathi hairline nentamo umbala ngokushesha uzonikwa. Shining bronzer kufanele zisetshenziswe ekhaleni, izihlathi, kwesilevu nebunzi ukwakha look yemvelo.
Wena eyolanda izandla isisekelo ibala
Akuve elula, kodwa leli phutha zaba ziningi kangaka. Kungani ukuhlola isisekelo izandla zakho uma uthatha ngqo ebusweni bakhe? Ubuso nezandla ngokuvamile anemibala ehlukene, njengoba zithole amanani ahlukene ilanga. Zama isisekelo ezansi esihlathini.
Wena ukulala makeup ngobuso
Uyazi, kungcono embi! Ngakho yasungulwa usula zokususa izimonyo. Lala makeup on isikhumba kubangela hhayi kuphela ukuqubuka, kodwa futhi esheshisa inqubo yokuguga. Makeup aqoqana ikhule ezimbotsheni afinyelela kubo, ekugcineni inqubo iba engelapheki. ikhule ezimbotsheni lakhulisiwe - emangelengele, landa esikhumbeni ubudala. Believe me, kubalulekile ukuba banakekele isikhumba ehlanzekile!
Awuzange ukusebenzisa concealer
Kubonakala kunengqondo ukuphetha Nokho ukusebenzisa concealer ngqo tindilinga amnyama,, dala phambi nabokhulumile unxantathu, okuyinto buqala lonke ubuso makeup yakho bheka yemvelo okuningi.
Ufaka isicelo lip liner kuphela emaphethelweni
Uma ungafuni ukuyichazela isitayela nineties, ungakwenzi. Uma-ke inflict lipstick, ngekuhamba kwesikhatsi othwala off futhi ngeke wesifunda alithandeki kuphela. Kungcono Ungasebenzisi ezambiwa futhi silisebenzise wonke ebusweni ezindebeni, ngakho baphenduka babheka kahle usuku lonke.
Ingabe usebenzisa Mascara waterproof nsuku zonke
Uma ungenalo ujuluke kakhulu futhi awuhambanga ukubhukuda, awudingi ukuba njalo ukusebenzisa izimonyo amanzi. Kuyinto eyelashes owomile kakhulu. Ngaphezu kwalokho, lokhu Mascara kunzima ukususa, okusho uzokhokhiswa ukukuthinta kakhulu amehlo akho phakathi kwenqubo uhlanzekile futhi kungalimaza nemivimbo engu.
Ungasebenzisi isisekelo ngaphansi ukuvenisha
Uma ungakwazi ukuthola ukuthi kungani ekhaya lakho manicure Akuthathi isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezimbalwa, lokhu kungaba isizathu esicacile. Ngesisekelo ngaphansi lacquer kwenza manicure ukumelana nezimo ecwebezelayo.
Ingabe ukusebenzisa othi awube okungalungile
Uma othi awube yakho ibukeka ezingezona ezemvelo, uzama ukuya nge ukhilimu ku powdery noma okuphambene nalokho. Pudrovye amelana kakhulu futhi ukhilimu ukunikeza umphumela engokwemvelo kakhulu. Kufanele ikhumbule uhlobo isikhumba kanye sonyaka, ngokukhetha ukuthungwa. Cream Blush uzobe ezigcotshwe isikhumba oily futhi powdery ukugxila ukoma kuphela.
Ufaka isicelo isisekelo kakhulu
Uma awuzami ukufihla ukuvuvukala, akunandaba mqondo ukusebenzisa isisekelo zonke ebusweni bakho - izobukeka buso. Gxila kuphela inkinga ezindaweni, isib, ku T-zone, indawo ezungeze ekhaleni futhi ngaphansi kwamehlo.
Ungasebenzisi primer ne izithunzi ne licwebezele
Uma ungathandi umthunzi nge sequins ngoba ewa, wena umane sizisebenzise kahle. Moisten ibhulashi amathonsi zamehlo, bese silisebenzise emthunzini ijwabu leso. Kuzwakala kungavamile, kodwa le ndlela kuqinisekisa ukuthi sequins ahlale phezu kwesikhumba. izinhlayiya sikhuntile zisuswe kalula nge ngethephu enamathelayo.
Awunayo wagqoka concealer powder
Noma ngabe wasebenzisa base izimonyo, concealer angase acinywe. Lungisa ke phezu kobuso esobala ungqimba elincanyana powder.
Wena qinisa up eyelashes ngesineke
Ngakho lokudlela up wena ngobunono imali inki. Ngaphezu kwalokho, udlawana angase aqale ukunamathelana futhi ukuyikhipha eyelashes.
Awuzange ukusebenzisa othi awube
Smile futhi sisebenzise othi awube kuya apula izihlathi, ku Isivalo kanye kancane emathempelini, umbala kwakusakazwa ngokulinganayo.
Wena alulaze nge acetone nail sula
Amakhemikhali e liquid nail remover sula siphela, okuyinto ngempela okunengqondo. Ngenxa yalokho, i-ukuvenisha umane spoilt. Sebenzisa ohlabayo ekhethekile kuphela.
Ufaka isicelo enze-up lapho izibani okungalungile
Sebenzisa ukwakheka ekukhanyeni yemvelo - lokhu kuqinisekisa imiphumela emihle! Uma uzobe ababethi nekamelo lokugezela amnyama, emgwaqeni Kungenzeka ukuthi izimonyo isicelo Ukuboshelwa.
Ingabe ukusebenzisa izimonyo elidala
Uma usebenzisa izithunzi abathenge lokukhula phakathi neminyaka yakhe esikoleni, ube nesikhathi uzilahle. Phakathi nalesi sikhathi izimonyo isivele spoilt.
Wena ubeke umthunzi olungalungile concealer
Kubonakala sengathi ukusetshenziswa umbala singasindi kunengqondo, kodwa ngeke nje ukugxila ezindaweni inkinga. Khetha concealer umbala ithoni kusho ke kuzobonakala ngokuphelele isikhumba sakho.
Uzama ukupenda amehlo inki ubudala
Uma uzama ngenkuthalo ukuhambisa ibhulashi ukufinyelela izinsalela isidumbu, wena kuphela isimo sibe sibi kakhulu. ukunyakaza yabo ulayisha emoyeni, okuyinto bome izimonyo. Uma ungafuni ukuba eyelashes nge izigaxa ethe njo, nje ukuthenga Mascara entsha. Kukhona inala ongakhetha izinga at an ngentengo eqolo.
Usebenzisa base okungalungile ngoba ukwakheka
Base ukwakheka kumele zikhethwa uhlobo isisekelo. Uma usebenzisa isisekelo esekelwe amanzi, musa wasibeka phezu abicah primer ezisekelwe. Izimonyo ngeke isebenze futhi bangaze usongwa ebusweni. Sebenzisa okhilimu kanye isizinda amanzi-based nge, okufanayo kusebenza imikhiqizo abicah ezisekelwe.
Mascara "Vivienne Sabo": ukubuyekezwa. Okuhlobisa Izimonyo Vivienne Sabo
Nazelie - izimonyo kusuka e-United States: ukubuyekeza zesikhumba ukunakekelwa
Umbala imfashini kakhulu lipstick
Palette "Garnier" - ukukhethwa ocebile
Tian - kuyini? okusho
Afunwayo izinkokhelo nomphakathi. usizo okubhekiswe
Ukuhlaziywa okuncane kanye nendima yayo ekutholeni inzuzo enkulu ngebhizinisi
UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki Sørvágsvatn Lake - mlando kwemvelo Faroe Islands
Amadevu induku: ukukhiqizwa izesekeli yasekuqaleni
Jig "iso cat sika" ngezandla zakhe